Taliyaha Ciidanka Danab ayaa sheegay in ay adkaan doonto in la buuxiyo xilligan booska… – Hagaag.com
Taliyaha Ciidanka Danab ayaa sheegay in ay adkaan doonto in la buuxiyo xilligan booska…
Taliyaha Ciidanka Kumaandooska Danab, Korneyl Axmed Cabdullaahi Nuur ayaa waxa uu ka hadlay ka bixitaanka Ciidamada Mareykanka ee dalka ku sugan.
Ciidamada Mareykanka ayaa wada qorshahoodii ugu dambeeyay ee ay uga baxayaan dalka, ka dib markii Xukuumadda Washington ay amartay in laga soo saaro horaanta sanadka soo socda ee 2021.
Tan iyo markii uu xafiiska la wareegay Madaxweyne Donald Trump waxa uu Mareykanku dardargeliyay hawlgalada dhanka cirka ee ka dhanka ah Ururka Al Shabaab.
Ciidamadan ayaa la sheegay in la gayn doono saldhigyada uu Mareykanka ku leeyahay dalalka Jabuuti iyo Kenya, isla-markaana uu Mareykanka sii wadi doono weeraradiisa ka dhanka ah Al Shabaab.
Korneyl Axmed Cabdullaahi Nuur, Taliyaha Kumaandooska Danab ayaa sheegay inay adkaan doonto in xilligan la helo dal kale oo buuxin kara booska uu baneynayo Mareykanka.
Taliyaha oo la hadlay BBC, waxna laga weydiiyay in loo darsan doono hawlgaladii Ciidamada Mareykanka ay dalka ka wadeen iyo in kale ayaa sheegay in mustaqbal dhow loo darsan doono, balse midka fog ay tahay in Soomaalida ay cashar ka bartaan inaanan la isku haleynin ciidan shisheeye.
“Mustaqbalka dhow haa, laakiin mustaqbalka fog runtii waxaan aaminsanahay in arrinkan aan ka baran karnaa inaan gacan shisheeye la isku haleyn karin, in anaga nagala rabo ummad ahaan, dowlad, dal iyo qaran ahaanba inaan iskaashano, cidna aanan isku haleynin. Marka mustaqbal fog waxaa laga yaabaa in aan ka barano casharkan in dib u dhiska ciidamadeena aan xil weyn iska saarno. Wadan shisheeye baa kuu yimid, gacan bay ku siinayaan, berrina way kaa taggayaan, tusaale fiican ayay tani noo tahay.” Ayuu yiri.